थाहापाई राख्नुस् ! आलु तरकारी मात्रै नभई औषधी पनि हो :: a1nepal.com.np
थाहापाई राख्नुस् ! आलु तरकारी मात्रै नभई औषधी पनि हो
आलु ! आलु हाम्रो भान्सामा मात्रै होइन, विश्वभरि नै तरकारीको रूपमा जति उपयोग हुने गर्छ त्यति सायदै अरू कुनै तरकारीको हुने गर्छ । सदाबहार तरकारीको रूपमा उपयोग हुने आलु शुष्क र न्यानो प्रकृतिको एक कन्दमूल पनि हो । आलुलाई तरकारीको राजा नै भन्दिए पनि फरक पर्दैन ।
आलु हाम्रो लागि तरकारी मात्रै नभई औषधी पनि हो भन्दा सायद तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर अनौठो नमान्नुहोस्, किनकी यसमा विलक्षण औषधीय गुण हुन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूले समेत पुष्टी गरिसकेका छन् ।
आलुमा हाम्रो शरिरको लागि अति नै आवश्यक पर्ने थुप्रै पौष्टिक तत्त्व पाइन्छ । यसमा क्याल्सियम, फलाम, भिटामिन बी र फस्फोरस प्रचुर मात्रामा हुन्छ । त्यसैले आलुलाई पूर्ण आहार पनि मानिन्छ ।
आयूर्वेदको क्षेत्रमा पनि आलुको प्रयोग त्यतिकै उपयोगी मानिन्छ । आयूर्वेदिकका अनुसारका आँखाको तल भएको कालो घेरा हटाउन आलुलाई पिसेर लगाएर लाभदायी हुने पुष्टी भइसकेको छ । आलुमा पाइने पोटासियम साल्टले अम्लपित्तलाई रोक्न काम गर्छ । त्यस्तै मृगौलाका रोगीहरुलाई समेत आलु खानु लाभदायी मानिन्छ । मृगौलामा पत्थरी हुँदा आलु सेवन गरे फाइदाजनक हुन्छ । त्यस्तै, कुनै चोटको कारण रगत जमेर निलो हुने गरेको छ भने काँचो आलु पिँधेर लगाउदा त्यसले लाभ मिल्दछ ।
← आठ घण्टाभन्दा कम सुत्नेलाई मानसिक समस्याको खतरा	दरबार विरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा साउदीका ११ जना राजकूमार पक्राउ →